Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2013
Nopotipotehin'i Mamy Rakotoarivelo tanteraka ny ankolafy Ravalomanana
2013-08-27 @ 22:06 in Politika
Raha misy ny fotoana maha-menatra ny mijoro ho manohana Ravalomanana ary mihevitra ho ao anatin'ny ankolafy Ravalomanana dia tsy misy tahaka ny amin'izao fotoana izao. Mifanindra-dalana amin'izany ihany koa, ankoatra ilay vaovao malaza nivoaka an-gazety hoe hanolotra olona amin'ny efa tsy fotoanany intsony ny ankolafy Ravalomanana, dia nisy lohatenin-gazety iray naningana nilaza fa tsy mamadika izany ny tenany, hoy i Mamy Rakotoarivelo. Raha ho an'ny mpamaky tsotra dia karazana fiampangan-tena izany fomba filaza izany. Matoa manko mandeha izany fitenenana izany dia reny any ampoto-tsofiny any ihany fa malaza ho mpamadika izy.
Hivadika fotoana hafa aho, raha nanery ny hanaovana ny soniam-pifanarahana tamin'ny FAT ilay lasa minisitry ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana Yves Aimé Rakotoarison, dia nisy nanambara tamiko fa mbola misy mpamadika ihany ao anatin'ny fitarihana io ankolafy Ravalomanana io. Nolazainy avy eo fa tsy ho vita mihitsy ny tolona raha tsy efa voaroaka ao amin'ny ankolafy Ravalomanana ihany koa i Mamy Rakotoarivelo. Tahaka izay zavatra tsy nampino ahy saingy tontosa tamin'ny tolona tapany voalohany (TGV) tamin'ny 2009 dia miha-jeren'ny olona, indrindra ny mpanara-dia an-dRavalomanana, fa toa hafahafa fihetsika ity mpitarika ny ankolafy ity. Mahalasa saina tokoa manko ny fihetsiny faraparany teo ka nahatonga ahy hitendry ny milin-tserasera.
Noho ny zavatra natao manokana dia lasa tsy nahara-baovao loatra aho, no sady tsy te-hanara-baovaon'ny taotaonkafa ka ny omaly tsy miova ihany. Saingy tsy maintsy misy ny zavatra re, noho ny resaky ny olona, ary hita ihany koa na dia andalovana fotsiny aza ny lohateny lehiben'ny gazety. Nanomboka tamin'ny fandavana ny firotsahan'i "Neny" dia nivoaka amin'izay ny fihetsika tsy mety rehetra izay azo niampangana ny ankolafy Ravalomanana ho mpandika lalàna no sady tia manao izany fihetsika tsy mety izany. Efa nivoaka ihany ny fanambarana avy amin'i "Neny" fa tsy tokony hanao fihetsiketsehana mandra-pahavitan'ny fanadinana ara-panjakana (Bacc) fa mbola nisy ihany ny nanentana hanao fihetsiketsehana tetsy Ankorondrano, ilay mpitarika ny ankolafy no tena niantsoantso ny hanao izany, avy eo dia nofoanany indray ilay izy "noho ny tsy fisian'ny olona nanaraka" hoy ny filazan'ny gazety tsy misalasala mihitsy ny hamasoka ny ankolafy Ravalomanana raha vao manana hirika hanaovana izany. Ny tao an-tsaiko raha nahare izany aho dia hoe niniana natao hohitan'ny voanjo mainty avy ao ampita atsinanana ao Afrika ao ny tsy fisian'ny olona nanaraka ho fampandresen-dahatra fa tsy mahazo olona intsony ny ankolafy Ravalomanana. Noheveriko noho izany fa nisy fifanarahana tany ambadika tany mba hamasohana ny ankolafy Ravalomanana. Nitatatata amin'izay ny haino aman-jery mpamasoka ankolafy fa menatra tsy sahy miresaka amin'ny mpanao gazety na manao fanambarana loatra ireo mpitarika ny ankolafy Ravalomanana taorian'iny zavatra nandamoka tanteraka iny. Izay manao izay hahamenatra ny mpitarika tsy hahasahy hilaza zavatra ampahibemaso iza anefa no tena tanjon'ilay izy rehefa tena nodinihana lalina.
Izao indray tratran'ny namasobasohana ny PHAT ho nametraka firotsaha-kofidiana "ninja" ny ankolafy Ravalomanana araka ny filazan'ireo mpifanandrina manao hoe : "taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra irery vao mamaky takotra!". Dia iniana atao izao indray ny fangatahana handrotsaka kandidà fisolo hafa amin'ny fotoana efa ivelan'ny nifanarahana. Kepoka tsy mahateny indray ireo nanesoeso an'i Andry Rajoelina satria izay nihomehezana tamin'ny volana mey no nalaina tahaka rehefa hifaraparana ny volana aogositra, izany hoe telo volana taty aoriana. Mbola paika hafa hamasohana ny ankolafy ihany izany toe-javatra izany. Koa lasa ho azy ny saina mitodika any amin'ny hoavy any hoe mbola ho avy ihany koa ny ratsy kokoa sy mahamenatra kokoa noho ny saina mivadika taorian'ny kabarin'i Andry rajoelina iny dia ho vasoka tanteraka indray ny mpanara-dia ny ankolafy.
Soso-kevitra vitsivitsy no efa naroson'ny maro fa tsy nisy nihaino moa dia ny mba hialan'izay olom-boatendry avy amin'ny ankoafy Ravalomanana rehetra hiala amin'ny rafitra tsy nahazoana na inona na inona ankoatra ny fankatoavana ny mpanonga-panjakana dia handroso tolo-kevitra mila fahasahiana hafa ihany koa aho hiarahan'ny mpitarika rehetra ao amin'ny ankolafy Ravalomanana manao fanambarana iraisana fa sady tsy mpitarika ny ankolafy Ravalomanana intsony i Mamy Rakotoarivelo no roahina tanteraka tsy ho ao anatin'ny ankolafy. Raha tsy mahavita izay fihetsika izay ny mpitarika hafa ao amin'io ankolafy io dia vita tanteraka ny amin'ilay ankolafy ary nandresy tanteraka ny teti-panorona napetraky ny Frantsay...
Izay angaha aloha ny amin'iny fa mety hilaza ny hevitro izay tsy hifanaraka amin'ny hetahetan'ny mpanara-dia ny ankolafy Ravalomanana koa aho amin'ny manaraka...
jentilisa, 28 aogositra (08) 2013